Ngaba ndingathanda ukwazi ukuba uzikhuphelela njani iividiyo zeTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingathanda ukwazi ukuba ndizikhuphelela njani iividiyo zeTwitch?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 274
Njengengxenye yoluntu lwaseTwitch, ungumthandi wemidlalo yevidiyo kwaye ngokuqinisekileyo ufuna ukugcina ezona vidiyo zibalulekileyo Kwelinye icala, ukuba uyinkampani yokusasaza eyenzayo, ungathanda ukuyigcina ukuze ubhekise kuyo kwixesha elizayo, nakweyiphi na imeko, kweli nqaku siza kukubonisa indlela yokukhuphela nokuba kukwividiyo zakho okanye, usilele oko, kusasazo lwakho oluthandayo.
Ukuba usasazo lokukhuphela lolwakho:
Ukuba ukhona ukusasaza kakhulu Ufuna ukugcina iividiyo ozenzileyo ngexesha losasazo ngqo, nangasiphi na isizathu, ukuba kunjalo, sichaza indlela yokwenza inyathelo ngenyathelo:
Kuya kufuneka ube nokubona kwangaphambili ukugcina iividiyo zakho kwelinye lamacandelo endawo onawo.
Ngena kwiqonga ngendlela eqhelekileyo.
Kwindawo ephezulu yesikrini seqonga, uya kufumana icandelo loqwalaselo, cinezela olu khetho.
Oku kuyakukuphambukisa kuthotho lwezinye iindlela, phakathi kwazo ekufuneka ukhethe kwaye ukhethe enye ehambelana "neChannel kunye neevidiyo".
Kwakhona, ezinye iindlela ziya kuboniswa, apho kufuneka ukhethe "Gcina ukuhanjiswa okudlulileyo".
Khumbula ukuba, ukuba eli nyathelo likuvumela ukuba ugcine ugqithiso lwangaphambili ngokuzenzekelayo, ezi ziya kugcinwa ixesha elingangeeveki ezimbini, kwimeko apho iya kuba ngomnye wabo basebenzisi abasandula ukuphuma eqongeni.
Kwimeko apho uliQabane, iTurbo okanye iNkulumbuso, le nkqubo iya kubagcina malunga neenyanga.
Ukulahla iividiyo zakho:
Nje ukuba isenzo sokugcina iividiyo kwindawo yeqonga sigqityiwe, kuya kufuneka ucofe kwifoto yeprofayile yakho.
Oku kuyakubonisa uthotho lweendlela onokukhetha kuzo kwaye ukhethe "uMvelisi weVidiyo". Eziza kuthi emva koko zikuthumele kuthumelo olugcinwe ngaphambili.
Khangela uze ucofe amachaphaza amathathu (·à'e) akhelwe kufutshane nevidiyo ekhethiweyo ukuze ukhuphele kwaye ucofe ukhetho lokukhuphela.
Ukuba ukuhanjiswa kuvela kubantu besithathu:
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba le ayisiyondlela inikwa liqonga, nangona ungayenza, kufuneka ube noncedo lwe iinkqubo zomntu wesithathu zokwenza njalo, okanye ukusilela oko, yeyona ndlela iphakanyisiweyo icetyiswayo, kufuneka ubacele kumntu ongumnini wothumelo abelana nawe.
Kwimeko apho uthatha isigqibo sokusebenzisa isoftware, sicebisa TwitchLeecher, Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi beqonga.
Khuphela kwaye ufake Inkqubo kwiPC yakho. Qalisa usetyenziso.
Khangela kunye khetha i-URL yevidiyo yokukhuphela, okanye ukusilela oko, into eyahlula kwezinye iividiyo ezikule ndawo. Cinezela ukhuphelo kwaye yiyo loo nto.
Ungalibali ukuba xa ukhuphela ividiyo kubantu besithathu, kungcono ufumane imvume yabo thintela iingxaki ezizayo.
1 Ungazikhuphela njani:
2 Ukulahla iividiyo zakho:
3 Ukuba ukuhanjiswa kuvela kubantu besithathu:
Ndifuna ukuncokola nge-Instagram Ngaba ikhona le ndlela?
Uyifaka njani i-emojis kwi-twitter?